Indlela yokwabelana nge-intanethi ukusuka kwifowuni ukuya kwi-PC okanye kwi-Mac | Iindaba zeGajethi
Indlela yokwabelana nge-intanethi kwifowuni ukuya kwi-PC okanye kwi-Mac
UJordi Gimenez | | Tutorials
Olunye ukhetho esinalo namhlanje lokudibanisa iPC, iMac, ithebhulethi okanye nayiphi na ikhompyuter kwi-intanethi ngendlela elula ngqo Ukwabelana nge-intanethi kwisixhobo sethu esiphathwayo. Oku bekunzima kakhulu kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwaye abanye babafowuneli babiza imali ngayo, kodwa namhlanje ilula kakhulu kwaye bambalwa abasebenzisi ababeka imiqobo endleleni yokwenza. Namhlanje siza kubona iindlela ezininzi zokwabelana nge-intanethi kwi-smartphone yethu nakwesiphi na isixhobo.
Okokuqala kukufumana uhlobo oluchanekileyo lokukwazi ukwabelana nge-intanethi ngaphandle kwemida kwaye, umzekelo, kwimeko yezixhobo ze-Android, kubalulekile ukuba ube ne-Android 9 okanye kamva ukuze ukwazi ukusebenzisa le nkonzo. Kwimeko ye-iOS, ukusikelwa umda kusekwe kuphela ngumnxibelelanisi womnxeba ngoko ke kungcono ukuba ujonge ngqo ukuba awuqinisekanga ukuba unako. Oko kwathethi, siza kubona amanyathelo okwabelana ngonxibelelwano olubizwa kanjalo kwi-Android "uqhagamshelo ekwabelwana ngalo", "ukusetyenziswa kwendawo yofikelelo" nakwi-iOS "indawo yofikelelo lomntu".
1 Yabelana ngoqhagamshelo lweselfowuni usebenzisa iWi-Fi kwi-Android
2 Yabelana ngoqhagamshelo ngentambo ye-USB
3 Yabelana ngoqhagamshelo ngeBluetooth
4 Yabelana ngoqhagamshelo lwakho lweselfowuni usebenzisa i-iPhone
5 Qhagamshela iWindows PC kwi-Intanethi ekwabelwana ngayo nge-USB
6 Lumkela ukusetyenziswa kwebhetri
Yabelana ngoqhagamshelo lweselfowuni usebenzisa iWi-Fi kwi-Android
Uninzi lweefowuni ze-Android zinokwabelana ngedatha ephathekayo ngeWi-Fi, iBluetooth okanye i-USB kwaye oku kufuneka ukuba sibe nohlobo oluhlaziyiweyo lwe-Android ukongeza ekubeni singasikelwanga mda ngumsebenzisi wethu. Siqala ngokhetho lokwabelana ngonxibelelwano ukusuka kwindawo yokufikelela kwi-Wi-Fi.
Ukwenza oku kuya kufuneka sivule usetyenziso lwe-smartphone kwaye ucofe ku:
Inethiwekhi kunye ne-Intanethi> iWi-Fi hotspot / Ukwabelana ngokudibanisa> indawo yokufikelela kwi-Wi-Fi
Cofa kwindawo yokufikelela kwi-Wi-Fi kwaye apho sinokuguqula useto olunje ngegama okanye iphasiwedi. Ukuba kukho imfuneko yoko, cofa kuqala Misela i-hotspot ye-Wi-Fi.
Okwangoku sinokongeza igama eligqithisiweyo kukhetho "Ukhuseleko". Ukuba awufuni igama eligqithisiweyo, unokucofa ku "Akukho"
Ngoku ungavula esinye isixhobo esiza kubonelela ngaso kwi-intanethi nge-smartphone kwaye kufuneka sifumane indawo yokungena kwi-smartphone yethu. Ukuba sinephasiwedi siyayongeza kwaye ukuba akunjalo sicofa nje kwiQhagamshela. Unokwabelana ngedatha yefowuni yakho ukuya kuthi ga kwizixhobo ezili-10 ngokusebenzisa indawo yokufikelela kwi-Wi-Fi.
Yabelana ngoqhagamshelo ngentambo ye-USB
Ngokusengqiqweni sinokwabelana nge-intanethi ngesixhobo sethu se-Android ngentambo ye-USB, ke olu khetho lunokuba lunomdla wokungalahli nasiphi na isantya kodwa inenxalenye engathandekiyo kwaye oko kukuthi IiMac azinokwabelana ngokudibana ne-Android ngentambo ye-USB. Nje ukuba oku kucacisiwe, siya kunye namanyathelo okwabelana nge-intanethi kwifowuni yethu.
Into yokuqala kukuqhagamshela i-smartphone kwikhebula le-USB. Isaziso 'esidityaniswe njenge' siya kubonakala phezulu kwesikrini
Sivula usetyenziso lweSetingi kwifowuni yakho kwaye ucofe kuyo Inethiwekhi kunye ne-Intanethi > Indawo ye-Wi-Fi / Yabelana ngoqhagamshelo
Qalisa ukhetho Yabelana ngoqhagamshelo nge-USB
Kwaye sele singonwabela uqhagamshelo kwinethiwekhi ngentambo. Khumbula ukuba iiMacs azihambelani nolukhetho ke kwezi meko kulunge kakhulu ukuba kugxilwe ngqo kunxibelelwano lweWi-Fi, endicinga ukuba yeyona ilungileyo kwiimeko ezininzi kuba zinonxibelelwano oluthile kwaye sifuna ngokukhawuleza ukuseka uqhagamshelo kwaye ngendlela elula.
Yabelana ngoqhagamshelo ngeBluetooth
Kule meko kufuneka sidibanise i-smartphone kunye nesinye isixhobo ngokumisela ummkeli wayo. Olu khetho alufumaneki kuzo zonke izixhobo, ke sihlala sicebisa ukusebenzisa inguqu yeWi-Fi ukunxibelelana nezixhobo, kodwa ukuba isixhobo sakho sivumela uqhagamshelo ngeBluetooth, unokulandela amanyathelo angezantsi.
Nje ukuba isixhobo esamkelweyo simiselwe ukumisela uqhagamshelo lweBluetooth, siyaqhubeka ngamanyathelo
Sivula usetyenziso Useto lwefowuni kwaye siyaqhubeka
Cofa ukhetho kwiinethiwekhi nakwi-Intanethi> Indawo yeWi-Fi / Yabelana ngoqhagamshelo
Ngoku cofa ku Yabelana ngoqhagamshelo ngeBluetooth
Kwaye ukulungele, Ngale ndlela uxhulumaniso luya kwabelwana ngeBluetooth.
Yabelana ngoqhagamshelo lwakho lweselfowuni usebenzisa i-iPhone
Kwizixhobo ze-iOS Olu khetho lukwalula kakhulu ukuphumeza kwaye kuyacaca ukuba nathi sinakho ukhetho lokwabelana nge-intanethi olukhoyo. Sinokukhetha phakathi kokukhetha i-Wi-Fi, iBluetooth kunye ne-USB, ke sihamba ngokhetho ngalunye. Cacisa ukuba ukusuka kwi I-iPad eneselfowuni Kuyenzeka ukuba wabelane nge-intanethi.
Siqala ngokhetho lweWi-Fi ukuba sabelane ngonxibelelwano kwaye oku kwenziwa ngendlela elula. Sangena Useto> Indawo yokufikelela buqu> Vumela abanye badibanise kwaye siyenza isebenze. Apha singongeza iphasiwedi ye-Wi-Fi okanye hayi, apha ngezantsi, xa sele yenziwe, vula isixhobo ukuze uqhagamshele kwaye ucofe uthungelwano lwe-iPhone yakho okanye i-iPad. Yongeza iphasiwedi ukuba kunjalo kwaye uzulazule.
Qhagamshela iWindows PC kwi-Intanethi ekwabelwana ngayo nge-USB
Xa izixhobo zethu zingenakho ukukhetha ukunxibelelana nge-Wi-Fi singasebenzisa intambo ye-USB ye-iPhone okanye i-iPad. Ngenxa yoko kufuneka sibe ne-iTunes kwaye siqiniseke ukuba i-PC iyayiqonda i-iPhone okanye i-iPad yethu.
Faka ingxelo yokugqibela ye-iTunes kwikhompyuter yakho
Ngentambo ye-USB, qhagamshela ikhompyuter kwi-iPhone okanye kwi-iPad ebonelela ngokwabelana nge-Intanethi. Ukuba uyacelwa, themba isixhobo.
Qiniseka ukuba unokufumana kunye nokujonga i-iPhone okanye i-iPad kwi-iTunes. Ukuba iWindows PC ayisiqapheli isixhobo, zama enye intambo ye-USB
Landela amanyathelo abonelelwe nguMicrosoft ukukhangela uqhagamshelo lwe-Intanethi ngaphakathi Windows 10 okanye Windows 7
Ukwabelana nge-Intanethi kuxhasa uqhagamshelo lweBluetooth neMac, iPC kunye nezinye izixhobo zomntu wesithathu, kodwa njengoko benditshilo kuhlobo lokwabelana nge-Intanethi kwifowuni yethu ye-Android, kungcono ukusebenzisa iWi-Fi, kuba kunjalo lula kakhulu inkqubo.
Lumkela ukusetyenziswa kwebhetri
Ukusetyenziswa kwebhetri ngale ndlela yokwabelana nge-intanethi ngokwenene yinto yokugcina engqondweni kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS. Ke sinokusifaka isixhobo kumandla lonke ixesha loqhagamshelo ekwabelwana ngalo ukunqanda ukuchitha kakhulu ibhetri kwaye kufuneka khubaza ukwabelana ngonxibelelwano nje ukuba sigqibe ukunqanda ukusetyenziswa kakhulu kunesiqhelo. Ukuba i-smartphone yethu inokungasebenzi kwindawo yokufikelela ngokuzenzekelayo xa kungekho zixhobo zixhunyiwe, sebenzisa olu khetho ukunqanda ukusetyenziswa okungeyomfuneko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokwabelana nge-intanethi kwifowuni ukuya kwi-PC okanye kwi-Mac
Uyisebenzisa njani ifowuni njengekhamera yewebhu
Uyicofa kanjani iprofayile yakho ukuba wabelana ngeakhawunti kwiNetflix